Tratran’ny angaredona ny fitondrana… : mihahenjana ny fitakiana sy fitokonana etsy sy eroa | NewsMada
Tratran’ny angaredona ny fitondrana… : mihahenjana ny fitakiana sy fitokonana etsy sy eroa
Par Taratra sur 20/05/2016
Na ny avy any ivelany (ONU, ny Amerikanina, ny FMI…), na ny eto an-toerana (FFKM, Fivondronamben’ny Eveka, Afo sendikaly, mpirakidraharaha, mpandraharaha fonja, mpampianatra,…) samy manenjana ny fitakiana sy fitokonana avokoa. Tratran’ny angaredona ny fitondrana.
Mbola nohamafisin’ny Amerikanina indray, afakomaly ny fitakiany ny marina momba ny raharaha andramena, nahavoarohirohy ilay mpandraharaha, Bekasy. Tsy eken’izy ireo ny hampanginana fotsiny izao io tranga iray io. Mampitafy henatra ny firenena ny tahaka izany. Tsy vitan’izany fa na ny FMI koa aza, nanampy ny fepetra apetrany mialoha ny dinika hamoahana ny famatsiam-bola ny ady atao amin’ny kolikoly. Efa nialoha ireo ny lahatenin’i Ban Ki-moon, nampihanjahanja ny mpitondra, manoloana ny tsy fahombiazany amin’ny sehatra rehetra ka nitakiny ny fandraisana andraikitra.
Efa nitondra ny fanakianany mivaivay ny mpitondra sy ny fomba fitantanany Fivondronamben’ny eveka sy ny FFKM ary nitaky fandraisana andraikitra koa.
Manambana hiverina hitokona ny mpandraharaha fonja
Etsy andaniny, nandrangaranga ny hiverina hitokona indray ireo mpandraharaha ny fonja satria efa ho tapitra ny fe-potoana telo herinandro nampiatoany izany. Tsy mbola nahazoam-baliny anefa ny fitakian’izy ireo ka izao tapa-kevitra ny hitokona izao indray izy ireo. Ny mpirakidraharaha fitsarana indray, efa tonga amin’ny ambonimbony kokoa ny hetsika ataony, tamin’ny nanagiazany ireo antontan-taratasy sasany eny anivon’ny fitsarana noho ny nanomezana olon-kafa ny fikirakirana izany amin’izao fitokonan’izy ireo izao.
Ankoatra izany, hifanotona, samy rahampitso asabotsy avokoa ny hetsika ataon’ny mpiasan’ny Air Madagascar sy ny tohin’ny tolon’ny Afo sendikaly. Handray fanapahan-kevitra manoloana ny tsy fahazoany ireo zo tokony ho azy sy ny nandroahana mpiasa anjatony tsy ara-drariny ireo mpiasan’io kaompaniam-pitaterantsika io. Nanentana ny vahoaka hihiaka amin’ny alalan’ny fitaovana samihafa ananany ho tsy fanekena ny kolikoly kosa ny avy amin’ny Mijoro ny Malagasy miady amin’ny kolikoly sy ny tsy rariny (MMKT), eo anivon’ireo sendikà, (Pejy 05).
Momba ireo mpivarotra, manomboka mampiaka-peo ny sasany amin’ny tsy fanekena ny fanisana azy ireo. Ohatra ny etsy amin’ny tsenan’i Soamanatombo. Efa manambana koa ny tsenan’Ambohimanarina raha nanaiky ny fandaminana kosa ny etsy Andravoahangy sy Anosibe. Ambaran’izy ireo ho mifono tetika hafahafa izany.
Mipi-kelika ny mpanohitra ary hahazo vahana
Manampy ireo, misoko mangina ny fiakaran’ny vidim-piainana. Mbola mandravarava ny asan-jiolahy. Nanafika mpamongady tamin’ny 1 ora antoandro tetsy Antohomadinika izy ireo. Manao andiany, manodidina ny 40, lahy sy vavy kosa ireo dahalo any atsimo sy ny any andrefan’ny Nosy amin’ny fanafihana ataony. Tsy mbola hita hatramin’izao ny tena paikady mazava hiadiana amin’izy ireo. Mianona amin’ny hetsika vonjy tavanandro ny mpitondra sy ny mpitandro filaminana.
Iny indray koa ny ambara fa fikasana hanongam-panjakana, afakomaly. Niteraka hatairana sy fitaintainana ary tahotra ho an’ny mpitondra izany. Tena izy koa anefa sa sarinady ? Manoloana ireo, mampahazo vahana ny mpanohitra izany rehetra izany na kely hery sy miparitaka ary mizarazara aza izy ireo. Mety hitodika any amin’ireo mpanao politika efa nanao ny tsy mety sy ny mpitondra teo aloha ny vahoaka… hahatsiaro ka hampitaha izany amin’ny mpitondra ankehitriny.
Tsy tokony hanao bemarenina ny fitondrana fa hitady vahaolana, tsy petatoko fa maharitra. Hananana fahasahiana handray fanapaha-kevitra. Mitondra antsika ho an’ny fitoniana, averimberin’ny mpitondra izany. Tokony hiaiky koa anefa fa tsy mahomby na hailika amin’ny hafa ny rihitra.